IT Knowledge Archives - Myanmar Web Designer (MWD) Co., Ltd.
Home » IT Knowledge
Myanmar Web Designer ရဲ့ ပထမဦးဆုံး WordPress Plugin ကို လွှင့်တင်လိုက်ပါပြီ
Myanmar Currency Exchange Rates ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ WordPress Plugin ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းတို့ Website အတွင်းမှာ မြန်မာကျပ်ငွေရဲ့ နိုင်ငံခြားငွေ ၃၈ အထိတို့ရဲ့ နေ့စဉ် update ငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကို ဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်တဲ့ နှုန်းထားအတိုင်း ဖော်ပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မသိရင်ခက်မယ် Facebook Algorithm 2020
လူကြီးမင်းက Facebook မှာ Page တစ်ခုထောင်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့လူလား ? ဒါဆို Facebook Algorithm 2020 ကို မသိရင် အခက်တွေ့နိုင်ပါတယ် !
Facebook က လက်မခံသော ကြော်ငြာပုံစံ (၁၀ ချက်)
Facebook က လက်မခံတဲ့အရာကို ထပ်ခါထပ်ခါ တင်ပြီး ကြော်ငြာမြဲ ကြော်ငြာနေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ ကြော်ငြာအကောင့်ပါ Disabled ဖြစ်သွားတာမျိုး၊ Credit Card ကိုပါ Burn သွားမျိုး ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် ကြော်ငြာလို့ မရနိုင်တာမျိုးဖြစ်နိုင်လို့ အခု နောက်ထပ် ဝေမျှမယ့် အချက်လေးတွေကိုလည်း ထပ်ပြီး ဖတ်ရှုပေးပါဦးနော်..
Facebook က လက်မခံသော ကြော်ငြာပုံစံများ
အင်တာနက်ကို အခြေခံပြီး ကိုယ့်ရဲ့ service နဲ့ product တွေကို Facebook ပေါ်မှာ စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ဖို့အတွက် Facebook Advertising ကို အသုံးလာကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခကြေးငွေပေးပြီး ကြော်ငြာတာတောင်မှ Facebook က လက်မခံတဲ့ ကြော်ငြာပုံစံတွေ ရှိတာမို့ ဗဟုသုတရအောင် MWD က sharing လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Graphic Design ဆွဲရာမှာ … မှားယွင်းသော အမူအကျင့်များ
သင့်လုပ်ငန်းကို လူအများက အလွယ်တကူ မှတ်မိနေစေဖို့နဲ့ အထင်ကြီး လေးစားစေဖို့အတွက် ဂရပ်ဖစ် ဒီဇိုင်းဟာ မရှိမဖြစ် အရေးပါပါတယ်။ ဒီလို အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဂရပ်ဖစ် ဒီဇိုင်းကို ရေးဆွဲရာမှာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျကျ စွမ်းဆောင်ဖို့ အခွင့်အရေး မရှိခဲ့ရင်တောင် အခြေခံအချက်တွေမှာတင် အမှားအယွင်းကင်းနေစေဖို့အတွက် ဗဟုသုတလေးတစ်ချို့ကို MWD က မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
သင့် Website မှာ CMS သုံးသင့်တဲ့ အချက် (၅) ချက်
Content Management System (CMS) ဆိုတာ သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ ဓါတ်ပုံ ၊ စာသား၊ အော်ဒီယို၊ Pdf စတဲ့ အချက်အလက်တွေ ကို သိမ်းဆည်းထားပေးပြီး Edit , Publish , Modify ,Delete စတဲ့ functions တွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ Software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ Content တွေကို အမြဲ တင်ပေးနေရတဲ့ အွန်လိုင်းမီဒီယာ Website တွေ ဟာ မဖြစ်မနေ CMS သုံးစွဲရမယ့် Website အမျိုးအစားတွေဖြစ်ကြပြီး MWD က ဘာကြောင့် CMS သုံးသင့်လဲဆိုတဲ့ အချက် (၅) ချက်ကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ် ။
Website တည်ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင် သိထားသင့်တဲ့ Website အမျိုးအစား 12 ခု
၁။ Blog Blog တွေကို အွန်လိုင်းဂျာနယ်(သို့) သတင်းအချက်အလက်မျှဝေရာနေရာတွေအဖြစ် မြင်ကြည့်နိုင်ပါတယ် ။Blog ပိုင်ရှင်ရဲ့ စိတ်ခံစားချက် အတွေးအမြင်၊ အသိပညာအတွေ့အကြုံတွေ ကို မျှဝေဖို့ အသုံးပြုကြပြီး Website (၁၂) မျိုးထဲမှာ တည်ဆောက်ရ အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ပါတယ် ။ ခရီးသွား Blogger တွေ၊ Food Blogger တွေ ၊ နိုင်ငံရေး သမားတွေနဲ့ အနုပညာရှင်တွေ လုပ်ကြတဲ့ Personal Website အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။